Homeमनोरंजनचर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस्
September 20, 2020 admin मनोरंजन, समाचार 226672
पछिल्लो समय सर्वा’धिक लोक:प्रिय बन्न सफल हास्य’कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को आज जन्मदिन परेको छ ।
वि. सं २०४० मा बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो सन्तानका रूपमा सोलु’खुम्बुमा जन्मेका सीताराम अर्थात् धुर्मुसले आज बिहिबार ३७ औं जन्म:दिन मनाउँदै छन् । मेरी बास्सैमा सीता’रामले अभिनय गरेको धुर्मुस पात्रले चर्चा र लोक’प्रियता कमायो ।
गत वर्ष जन्मदिन मनाउँदै
मेरी बास्सै निर्माण’कै क्रममा उनले धुर्मुस’को जोडीको रुपमा देखिएकी कुञ्जना घिमिरे(सुन्तली)सँग विवाह गरेका थिए । यस्तै, च’लचित्र निर्माण र अभिनयमा पनि सीता’राम कट्टेल सह’भागी छन् ।
६ एकान ६, वडा नम्बर ६ लगायतमा हिट चलचि’त्रमा पनि कट्टेलले अभिनय गर्नुका साथै लगानी पनि गरेका थिए । वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पप’श्चात धुर्मुस सुन्तली’को जोडी सामाजिक का:ममा पनि सक्रिय छन् ।
गत वर्षमा जन्म दिन मनाईएको तस्बिर
भूकम्प पश्चात यो जोडीको सक्रि’यतामा काभ्रेको डाँडा’गाउँमा एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोक’को गिरानचौरमा नमुना बस्ती, महोत्त’रीको बर्दिबासमा मुसहर बस्ती, रौतहट’को सन्तपुरमा एकीकृत दलित बस्ती बनाइस’केका छन् । अहिले धुर्मुस सुन्तली क्रिकेट रंगशाला बना’उन जुटेका छन् ।
ग्यासको मूल्य पसलै पिच्छे फरक, वास्तविक मूल्य कति ? थाहा पाउनुहोस्
May 22, 2021 admin समाचार 5404
May 29, 2021 admin समाचार 5758
February 14, 2021 admin समाचार 6555
आज १४ फ्रेबरीअर्थात् भ्या’लेन्टाइन्स डे । संयोग के भने आजै अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको जन्म’दिन परेको छ । फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी सुष्माले जन्मदिनको अ’वसरमा हाम्रो कला टिभीसँग गरेको क्याजुअल